१ लाख म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, के– के चाहिन्छ योग्यता ? – Durbin Nepal News
१ लाख म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, के– के चाहिन्छ योग्यता ?
चैत्र १, २०७८ ७:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त मागेको छ । म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन इन्छुक महिला पुरुषले यही चैत ६ बाट चैत ११ सम्म दरखास्त दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघिको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकाहरुलाई पनि प्राथमिकता दिइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । २०७८ चैत १५ बाट म्यादी प्रहरीको छनौट सुरु हुनेछ । चैत २२ मा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गर्न यस अघिका निर्वाचनमा पनि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरुको सेवा सुविधा भने प्रहरी जवान सरहको हुनेछ ।